Indawo yokulala eyi-3 yokurenta eColchester, Essex
Real Estate Listings: » All Others Real Estate » All Others Real Estate » GB » Essex » Colchester » Indawo yokulala eyi-3 yokurenta eColchester, Essex1
United Kingdom, Essex, Colchester, Co2 9hf
Ikhowudi yeposi: Co2 9hf
Indlu yegumbi lokulala enobuhle kunye ebanzi yekhaya eli-2 kwindawo efunwa kakhulu emva kophuhliso lweFortuna Park eColchester. Ngobuninzi bezinto ezinkulu ezikufuphi ngokubandakanya iZikolo zaseKhaya kunye neepaki, esi sisiseko esifanelekileyo sosapho lwakho olukhulayo.Light kunye ne-airy kulo lonke kwaye ihonjiswe ngemibala yangoku, indawo yokuhlala iqala ngeholo yokungena kumgangatho osemhlabeni okhokelela Igumbi lokuhlala. Ngomgangatho wethayile kunye nokufudumeza okuphantsi kweenyawo, iinyawo ezincinci azinakuze zibuva ukubanda. Ikhitshi liyile mihla kuyilo kwaye lixhotyiswe ngokufanelekileyo ngezinto zombane ezihlanganisiweyo kwaye kukho nendawo yokugcina amagumbi phantsi komhlaba. Igumbi lokuhlala linendawo eyaneleyo yeeasofa zakho ezithandekayo kunye netafile yokutyela kwaye ineengcango zepatio ezijonge kwaye zikhokelele egadini. Kumgangatho wokuqala, igumbi lokulala eliphambili liyindawo efanelekileyo kaMama noTata ukuba baphumle kwaye baxhamle kwigumbi lokuhlambela eliqinisekisiweyo. Igumbi lesibini lokulala lilikhulu ngendlela emangalisayo, indawo ezimbini kwaye lihamba lonke ubude bendlu kwaye igumbi lesi-3 liyindawo encinci ephindwe kabini kwaye kukho igumbi lokuhlambela losapho lwangoku.Ngaphandle, igadi engasemva ibekwe e-lawn ngepatio kwaye iyakwazi ukufikelela igaraji. Ukupaka kufumaneka kunye negaraji kunye neyongezelelweyo eyongezelelweyo yokupaka. Unikezwe ungachazwanga kwaye uyafumaneka eMid-Late May, fowuna ukujonga! Igumbi lokuhlala4.51m x 4.34m (14 '10 "x 14' 3") Ikhitshi2.36m x 2.14m (7 '9 "x 7' 0") eCloakroom1 .74m x 0.95m (5 '9 "x 3' 1") Igumbi lokulala elikhulukazi4.60m x 3.17m (15 '1 "x 10' 5") Ensuite1.99m x 1.97m (6 '6 "x 6' 6". ) kwigumbi lokulala 25.01mx 2.58m (16 '5 "x 8' 6") igumbi lokulala 32.88mx 2.31m (9 '5 "x 7' 7") Igumbi lokuhlambela1.97m x 1.7m (6 '6 "x 5' 7")
Nxibelelana nentengiso 0120698xxxx
, Co2 9hf
400 Pound £ / Ngenyanga
&nbspColchester in Essex, Co4 5fh
4 Bed Barn Conversion To Rent In Colchester, Essex
1,995 Pound £ / Ngenyanga
&nbspColchester in Essex, Co7 8qs
&nbspColchester in Essex, Co1 2aj
1,000 Pound £ / Ngenyanga
&nbspColchester in Essex, Co4 5dl
3 Bed Maisonette To Rent In Colchester, Essex
900 Pound £ / Ngenyanga
&nbspColchester in Essex, Co3 4bn
Izikolo ezikufutshane Co2 9hf